कोरोना म्युटेसन : सोचिएभन्दा गम्भिर भन्ने कुनै संकेत छैन :: NepalPlus
कोरोना म्युटेसन : सोचिएभन्दा गम्भिर भन्ने कुनै संकेत छैन
मिशेल गोल्डमेन२०७७ पुष ७ गते १८:०१
Photo- The Pharma letter
बेलायतमा कोरोना भाइरस म्युटेसन (उत्परिवर्तित) भएको वा कोरोना भाईरसले आफ्नो रुप बदलेकाले सोचेभन्दा गम्भिर हुनसक्ने, खोपले काम नगर्न सक्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । तर भाईरसको म्युटेसनले यो रोग अझ धेरै फैलिन्छ भन्नेमा कुनै संकेत देखिएको छैन ।
बेलायतमा अवलोकन गरिएको कोविड-१९ को नयाँ तनावले भाइरस ४०-७० प्रतिशत अझ बढि सर्नसक्ने बनाउन सक्छ भन्ने रिपोर्ट गरिएको छ । यसले चिन्ता ब्यक्त गरेपनि खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन ।
बेलायतमा कोविड १९ को नयाँ संस्करण देखिएको सार्वजनिक भएपछि फ्रान्सलगायत धेरै युरोपेली देशहरूलाई आइतवार (डिसेम्बर २०) मा एक अर्को देशसँगको सम्बन्ध स्थगित गर्न प्रेरित गर्‍यो । बेलायती सरकारका वैज्ञानिक सल्लाहकार प्याट्रिक भालान्सका अनुसार यो नयाँ तनाव द्रुत गतिमा फैलिनुको अलावा भाइरसको “प्रबल” रूप पनि बन्ने छ । यसले डिसेम्बर महिनामा अस्पताल भर्नाको संख्यामा “धेरै वृद्धि” गरेको छ ।
तर मेरो बिचारमा के लाग्छ भने नयाँ किसिमका अन्वेषणहरूले खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन । किनभने युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीलेनै जाँचबुझ गरेर भर्खरै फाइजर र बायोटेकद्वारा उत्पादित खोप लगाउन अनुमति दिईसकेको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एक वर्ष पहिले चीनमा देखापर्दा र अहिले कोभिड १९ मा धेरै परिवर्तन भएको छ । गत अप्रिलमा चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले ती मध्ये तीस वटा पहिचान गरे । तर आज अरू धेरै छन् । केही नयाँ रुपहरूले पहिलेदेखि नै भाइरसलाई अझ संक्रामक बनाउने शंका गरिएको थियो, विशेष गरी चीनबाट युरोपमा प्रसारित भएको बेला ।
यो बदलिँदो अवस्था र रुपसित अनुकूलनको धेरै नै प्राकृतिक तरीका हो : भाइरससँग आनुवंशिक तत्व हुन्छ जुन उनीहरूले प्रतिलिपि रुप बनाउँदा परिवर्तन हुनसक्छ । अर्को शब्दमा बन्ने हो भने उत्परिवर्तनले यस्तो हतियार प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्दछ जुन भाइरसले कोषहरूमा प्रवेश गर्न प्रयोग गर्दछ । यी नयाँ तनाव वा रुपहरूले मुख्यतया सबैभन्दा डरलाग्दो भाइरसहरू वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको प्रतिक्रियाहरूबाट बच्न सक्ने संभावना राख्छन् ।
धेरै जसो समय यी उत्परिवर्तनहरू तटस्थ हुन्छन् । तिनीहरू प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रतिक्रियाको खतरनाक प्रसारण वा संवेदनशीलता परिवर्तन गर्दैनन् । बेलायतको मामलामा वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ कि कोविड १९ को उत्परिवर्तनले भाइरसलाई ४० देखि ७० बढी संक्रमित बनाउने छ । त्यसकारण हामीले ति चीजहरूलाई सोचनिय अवस्थामा राख्नुपर्दछ । अहिलेको समयको लागि, त्यहाँ रोग अत्यन्तै गम्भीर हुने संकेत गर्ने केहिपनि देखा परेको छैन । नत्र त यो अधिक चाँडो देखिने थियो ।
तरपनि हामी निरन्तर सतर्क भने रहनुपर्छ । त्यहाँ चिन्ताको कुनै कारण छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन । किनकि जब एकैसाथ बेलायतको सिमाना बन्द गरिन्छ । मेरो विचारमा त्यहाँ खतराको घण्टि बज्नुपर्ने कारण नभएपनि त्यहाँ सतर्क हुनुपर्ने केहि कुरा छ । पहिले हामी वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेका छौं त्यो छनौट गर्न आवश्यक छ । के यो नयाँ फैलावटले प्रसारणको श्रृंखला तोड्न गरिएको प्रयासलाई असफलता गराउँछ भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ ? वा कोरोना भाइरस लकडाउनकै नियमहरु पर्याप्त रूपमा लागू गरिएको छैन कि ? यी प्रश्नहरू त्यस्तो समयमा वैध हुन्छन् जब फ्रान्समा हालसालैका हप्ताहरूमा भाईरस फैलावटको वक्र कम हुँदै गएको छ । फ्रान्ससँगै धेरै युरोपियन देशहरूमा पनि छ त्यो ।
खोपको विकास गर्दा हामी भाइरसको सबैभन्दा सक्रिय भागलाई लक्षित गर्ने प्रयास गर्छौं । हामी यी संक्रामकका बाहकहरु विरूद्ध प्रतिरक्षाहरू तयार गर्छौं । हामी यो सुनिश्चित गर्दै काम गर्छौं ताकि तिनीहरू महत्त्वपूर्ण उत्परिवर्तनमा सक्रिय नहोउन् । यद्यपि हामी सबै परिवर्तनहरूको अनुमान गर्न सक्दैनौं ।
भाइरस नयाँ प्रवाहमा थप परिस्क्रित हुनु एक प्रक्रिया हो जुन समयको साथ थप परिष्कृत हुनसक्छ । हामी यसलाई फ्लूको उदाहरण दिन सक्छौं । प्रत्येक वर्ष इन्फ्लूएन्जा खोपलाई रूपान्तरण गरिन्छ ताकि सुरक्षा सम्भव भएसम्म राम्रो हुन्छ । महामारीको सन्दर्भमा, समय बढ्दै जाँदा त्यस अनुसार क्षमता र प्रभावकारितालाईपनि बृद्धि गर्न बाध्य हुन्छन् अनुसन्धानकर्मीहरु । हामीले कोभिड १९ को आविष्कार भएको मात्र एक वर्षमै धेरै खोपहरू विकास गर्न सक्षम भयौं भने हामीले के कल्पना गर्न सक्छौं भने प्रयोगशालाहरूले भाईरसको म्युटेसन (उत्परिवर्तन) हुँदापनि त्यस अनुसार चाँडो अनुकूलन गर्न सक्ने गरि खोपको विकास गर्न सक्छन् । तर अहिले त्यसो गर्नु आवश्यक छैन ।
पहिले हामीले खोप लगाउने अभियानको लागि तयारी गर्नुपर्छ । यसकालागि युरोपमा संघसंस्थाहरुको स्थापना गरिने छ । म भविष्यका हेरा (आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण) को विशेष भूमिकाका बारेमा सोच्दै छु जसले ईयू देशहरू बीचको स्वास्थ्य मामिलामा राम्रो समन्वयको अनुमति दिनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिले त कोविड १९ लाई पराजित गर्नेगरि खोपलाई मिलाउनसक्नुपर्‍यो । भाईरसले रुप बदल्दै जाँदा त्यस अनुसार फेरि परिस्क्रित गर्ने कुरा आउँछ ।
यो नयाँ परिवर्तनको बाबजुद हामीले कस्तो मनोवृत्ति अपनाउनुपर्दछ भन्ने चासोपनि धेरैलाई छ । यसमा मलाई चिन्ताको विषय धेरै छ जस्तो लाग्दैन । यदि यो भाइरस वास्तवमै बढी संक्रामक छ भने स्वास्थ्यका उपाय, सामाजिक दूरी र सुरक्षा अपनाउनुपर्ने कुराहरुको सम्मान गर्नु आवश्यक रहनेछ । बिर्सन नहुने कुरा के छ भने फ्रान्सका राष्ट्रपती र बेलायतका प्रधानमन्त्री जस्ता सबैभन्दा सावधान, बुझक्कि, सतर्कता अनपाउनुपर्ने र सुरक्षाले घेरिएका व्यक्तिलाई भाइरसले संक्रमित गरिसकेको छ । यो तिनै नियमहरु पुरा नगर्नाले हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
त्यसकारण हामीले चाँडो भन्दा चाँडो खोपहरू पुर्‍याउनुपर्छ र सकेसम्म धेरै जनसंख्यालाई खोप दिन सक्नुपर्छ । भाइरस प्रसारणलाई अवरोध गरिदिने यो उत्तम तरिका हो । यो तरिका भाईरस उत्परिवर्तनले बढी खतरा पुर्‍याउने माध्यम रोक्ने उपायपनि हो ।
अन्तमा, यदि तीन चरण खोप रणनीति – पहिलो नर्सिङ होमा दिईने, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिईने र अन्त्यमा बाँकी जनसंख्यालाई दिने भन्ने सरकारद्वारा परिभाषित तरिका प्रासंगिक छ । हामीले युवाहरुमापनि जोखिम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ भुल्नुहुन्न । तिनको जोखिमलाई कम आँक्नुहुन्न । खोप दिन थालेपछि आगामी वर्षमा ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका नागरिकमा संक्रमण अधिक देखिने छ ।
(मिशेल गोल्डम्यान फ्रि युनिभर्सिटी बेल्जियममा मेडिकल इम्युनोलजीका प्राध्यापक हुन् । फ्रान्सेली भाषाको फ्रँस २४ न्युजमा प्रकासित उनका बिचारलाई नेपालप्लसले भावानुवाद गरेको हो)